Asian Archives - Matupi Times Olthang
Asian January 8, 2020
JICM ရှဈကွိမျမွောကျဆှေးနှေးပှဲ နပွေညျတျောမှာကငျြးပ
တဈနိုငငြံလုံး အပဈခတတြိုကခြိုကရြေး ရပစြဲရေး သဘောတူစာခွုပြ အကောငအြထညဖြောမြှုဆိုငရြာ ညှိနှိုငြးအစညြးအဝေး JICM ရှဈကှိမမြှောကဆြှေးနှေးပှဲကို နပှညေတြော NRPC မှာ ဒီနကေ့ငြွးပခဲ့ပါတယြ။ဒီပှဲမှာ ဒေါအြောငဆြနြးစုကှညကြ လကနြကကြိုငပြဋိပကျခတှေ မွားလာတာနဲ့ ပတသြကပြှီး သတိပေးပှောကှားခဲ့ပါတယြ။ ဒီနေ့ ဆှေးနှေးပှဲကို ဒုတိယတပမြတောကြာကှယရြေးဦးစီးခွုပြ ဒုတိယဗိုလခြွုပမြှူးကှီး စိုးဝငြးနဲ့ ရှမြးပှညတြပမြတြော၊ ရှမြးပှညပြှနလြညထြူထောငရြေးကောငစြီ RCSS/SSAဥကျကဋျဌ ဗိုလခြွုပကြှီး ယှကဆြဈတို့ တကရြောကခြဲ့ပါတယဒြီနေ့ ဆှေးနှေးပှဲအပှီးမှာ စတုတျထအကှိမမြှောကြ ၂၁ ရာစုပငလြုံညီလာခံကို လာမယြ့ ဧပှီလ မတိုငခြငကြငြွးပဖို့…
Asian November 10, 2019
မလေးရှားနိုငျငံနဲ့ နယျခငျြးထိစပျနတေဲ့ ထိုငျးနိုငျငံတောငျပိုငျး နယျစပျ ယလား ခရိုငျထဲမှာ နယျမွရှေငျးလငျးရေး လုပျနပွေီး တရားမဝငျ နထေိုငျတဲ့သူတှကေို စဈဆေးတဲ့အခါ ထှကျမပွေးကွဖို့နဲ့ အသာတကွညျ အစဈဆေးခံကွဖို့ ထိုငျးစဈတပျက သတိပေးထားပါတယျ။ နိုဝငျဘာလ ၅ ရကျနကေ့ ခှဲထှကျရေးအငျအားစုတှကေ ဝငျရောကျပဈခတျခဲ့လို့ ပွညျသူ့စဈတပျဖှဲ့ဝငျတှနေဲ့အတူ မိသားစုဝငျတှပေါ စုစုပေါငျး ၁၅ ယောကျ သဆေုံးခဲ့ပွီးနောကျ အခုလို နယျမွရှေငျးလငျးရေး စတငျနတော ဖွဈတဲ့အကွောငျး ထိုငျးအခွစေိုကျ ဗှီအိုအသေတငျးထောကျ မအေးအေးမာက သတငျးပေးပို့ထားပါတယျ။…
Asian November 9, 2019
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် (၃၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီး အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးများ တက်ရောက်စဉ် ကာလအတွင်း Thai Red Cross AIDS Research Centre သို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ခြင်း၊ အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်၊ ရုရှားဝန်ကြီးချုပ်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ၏ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ အကြီးအကဲနှင့် ကမ္ဘာ့ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ တို့နှင့် သီးခြားစီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် (၃၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး များသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည့်ခရီးစဉ် အတွင်း နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် King Chulalongkorn Memoral Hospital ရှိ Thai Red Cross AIDS Research Centre သို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီး နာယကများဖြစ်ကြသော HRH Princess Soamsawali Korm Muen Suddhanarinatha နှင့် HRH Princess…
Asian November 8, 2019
Aluancia Bawipa thawht’hanni sunglawi “Easter Sunday”an rak tuah lio ah nunnak thap bak in bomb puah nak ruang ah minung 250 an rak thi.cu pin ah tamlak te nih hliamhma an rak tuar i,cu ruangah cun…
Asian November 7, 2019
Manny Pacquiao: Bible rel le Thlacam nak nih teinakaka coh ter lengmang miasi
WBA Super Welterweight Champion thar Manny Pacquiao nih cun mi dang Boxer bantuk in pumrual tha mi ka si lo,athawng ngai mi zong ka si fawnlo na in Pathian nih teinakaka…
Asian November 6, 2019
Thailand Ram Ah A Thi Mi Win Moe Kyaw A Hringtu A Nu Le Pa Hna Cu Ting 3Baht Pek Dingin Kawl Cuahmah An Si
Kawlram mi Thailand ram ah kuli rian t’uan (ihlawhfa) inaum mi Win Moe Kyaw cu motor nih thih lak inapah ruangah Thailand cozah nih sun Win Moe Kyaw iahringtu…
Tuluk ram ah Tuluk Nu tthit dingahar ning hi rak ngai ve tuah u
Tuluk ram ah Nupi tthit dingahar ning hi Nu le Pa hna nih dawtnak tak tak zoh tilo in Chawle va lawng an zo cang. An fanu hna caah Va (partner) an zotik…
Korean Lifestyle hiattha na ti ve maw?
Asia ram ah cun Korea ram hi modeling lei ahathangcho ngai mi ram pakhat nakasi. Hlasak le lam ah zawng si se, cun hnipuan I hruk-aih lei zawng si se Asia…
Asian November 5, 2019
အိန္ဒိယအစိုးရ၏ အချိန်မီဝင်ရောက်ဆောက်ရွက်မှု့ ဖြင့်AA ဖမ်းဆီးခဲ့သည့် ချင်းအမတ် ပြန်လွတ်လာပြီဟု ဆို
အိန္ဒိယအစိုးရ၏ အချိန်မီဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု့ ဖြင့် AA အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားသည့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံသား ငါးဦး၊ မြန်မာလွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးနှင့်အခြား မြန်မာနိုင်ငံသား ၄ ဦးတို့ မှာ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ထားမှု့ အရ သိရသည်။ အဆိုပါသတင်းကို အတည်ပြုနိုင်ရန် The Ladies News က ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ၎င်းတို့ လည်း သတင်းကြားရုံသာ ရှိသေးပြီး အတည်မပြုနိုင်သေးဟု…
Asian October 24, 2019
မီဇိုရမ် ကင်းထောက်လူငယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လေ့လာရေးသွားရောက်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်အစိုးရ လူငယ်နှင့်အားကစားဌာန၏ Mizoram Sports & Youth Services Department စီစဉ်မှုဖြင့် ၃၈ ဦးပါဝင်သော မီဇိုရမ်ကင်း ထောက် လူငယ် Mizoram Bharat Scouts &Guides အဖွဲ့တို့ ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံသို့ လေ့လာရေးခရီးစဉ်သွားရောက်ရန် မီဇိုရမ် ပြည်နယ်မှ စတင်ထွက်ခွာခဲ့သည်။ Mizoram Bharat Scouts & Guides unit…
Asian October 23, 2019
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ဂျပန်ဧကရာဇ် နာရူဟီတို၏ထီးနန်းတက်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရန် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်သည့် တရားဝင်ခရီးစဉ် (တတိယနေ့)
ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့၌ရောက်ရှိနေသောနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင် ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တိုကျိုမြို့ ဘုရင့်နန်းတော်၌ ကျင်းပသည့် ဂျပန်ဧကရာဇ် နာရူဟီတို၏ ထီးနန်းတက်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထီးနန်းတက်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ဂျပန်ဧကရာဇ် နာရူဟီတိုက မိန့်ခွန်းပြောကြားပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာ ရှင်ဇိုအာဘေးက ဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ပြုစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ထို့နောက် ဂျပန်နိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များက ဂျပန်ဧကရာဇ် နာရူဟီတိုနှင့် မိဖုရား မာဆာကိုတို့အား ချီးမွမ်း ထောပနာပြုကြပြီး အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။…
“MATUPI AH MATU CAA MEYET LAE A CANG U EH?” (67,376)
Donald Trump neh Kim Jong-Un Historical Summit ah senathuh rhoi (46,915)
Italian Industrial ung (35,911)
Kan Kaw Myo ah kum 70 atling nah Namtu Khohnin (CND) akang paa uh (28,954)
Duek olthang (22,373)
North-Korea loh America neh Thikat la Caboi vel hmaih ham abih (17,625)